I-Google Chrome 79 iza nomsebenzi wamathebhu wokuqandisa, uhlu lwabamnyama ngesikhathi sangempela nokuningi | Kusuka kuLinux
IGoogle isanda kumemezela ukwethulwa kwe- inguqulo yesiphequluli sakho sewebhu I-Google Chrome 79, inguqulo ekhishwe ngokulungiswa kwamaphutha, kepha futhi ngezici ezintsha njengokusekelwa okwakhelwe ngaphakathi kokuqinisekiswa kwephasiwedi, Izinhlu ezikhona zesikhathi sangempela zamasayithi anonya nge-Safe Browsing API, ukutholakala kokuvikelwa kobugebengu bokweba imininingwane ebanzi kanye nezinye izici.
Le nguqulo entsha ye-Google Chrome isivele itholakalela izinhlelo ezahlukahlukene zokusebenza okuyiWindows, Mac OS neLinux. Endabeni yeLinux, ama-binaries wokusabalalisa okwehlukile aseqalile ukufika ngaphakathi kwezinqolobane zawo.
1 Yini okusha kuGoogle Chrome 79?
2 Ungayifaka kanjani iGoogle Chrome 79 kuLinux?
Yini okusha kuGoogle Chrome 79?
Kulolu hlobo olusha lwesiphequluli sewebhu se-Google Chrome 79, a umsebenzi omusha "wamathebhu wokuqandisa" owethulwe ngenhloso yokonga izinsiza zememori, I-CPU nebhethri kumakhompyutha. Ngamanye amagama, ukusebenza kukhulula izinsiza ze-CPU ne-RAM zamanye amathebhu noma ezinye izinhlelo zokusebenza ezisebenza endaweni.
Amathebhu agcinwe ngemuva ngaphezu kwemizuzu engu-5 azomisa futhi ngeke bakwazi ukwenza imisebenzi. Noma kunjalo, kukhona okuhlukile kokudlala okulalelwayo nevidiyo, kanye nokurekhoda. Ngokwencazelo yakwa-Google, isici asivulwa ngokuzenzakalela, udinga ukuzenzela ngokwakho kuzilungiselelo.
Enye into entsha evelele kule nguqulo yi- ukuthuthuka ekuvikelweni kwephasiwedi nangokulwa nobugebengu bokweba imininingwane ebucayi be-Google Chrome. Isandiso Ukuhlolwa kwephasiwedi manje sekuhlanganiswe nomsebenzi we- "Sync and Google Services" bese ubheka ukuthi amanye amaphasiwedi akho awazange adalulwe kwezinye izinsizakalo eziku-inthanethi.
Ngokwengeziwe, ezinye izinsizakalo ezimbili zokuvikela ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi zithuthukisa ukuphequlula okuphephile futhi zikuxwayise lapho kufakwa amaphasiwedi kumasayithi anonya. Uma sesenziwe sasebenza, isici sikhomba amaphasiwedi akho adaluliwe ku-inthanethi bese sinikeza ukuwashintsha.
Ngakolunye uhlangothi futhi singathola ukuthi i-Chrome inokulungiselelwa kokuphepha eyaziwa njenge-Safe Browsing API. Ngaleli thuluzi, i-Chrome ilanda uhlu lwamasayithi amabi aziwayo njalo ngemizuzu engama-30.
Kodwa-ke, iGoogle ilinganisela ukuthi ezinyangeni ezedlule, abalingisi abanonya bashintshe amasayithi nezizinda ngesivinini esisheshayo, basebenzisa lokhu kubambezeleka kwemizuzu engama-30. Ngokukhishwa kwe-Chrome 79, i-Google ikholelwa ukuthi i-Chrome izoba nenketho entsha kusici se- "Sync and Google Service" esizovumela abasebenzisi ukuthi banike amandla ukuskena kwesayithi lesikhathi sangempela.
Olunye ushintsho kuGoogle Chrome 79 yilokho ivumela isiphequluli ukuthi sigxile kangcono kuphrofayela oyisebenzisayo ngokungeza igama eceleni kwe-avatar. Kuhloswe ngamadivayisi abiwe nabasebenzisi abaningi, i-Google ifuna ukuqinisekisa ukuthi ugcina imininingwane ku-akhawunti elungile yakwa-Google. Lesi isibuyekezo esibonakalayo futhi ngeke sishintshe izilungiselelo zakho zamanje zokuvumelanisa.
Sibuye sibuyekeza ukubonakala kwemenyu yephrofayili uqobo: manje yenza kube lula ukuyishintsha futhi ikwenze kucace ukuthi ngabe ungene ngemvume ku-Chrome noma cha, "kusho iGoogle.
Okokugcinafuthi kwenziwa umsebenzi wokuhlola yini umsebenzi "Inqolobane yokubuyela emuva". Lo msebenzi uzokwenza ikuvumela ukuthi udale inqolobane ekhethekile yezinkinobho "zangemuva" nezithi "ngokulandelayo" ku-Chrome.
Uma umsebenzisi abuyela emuva noma phambili emlandweni wabo wokuphequlula, ikhasi lilayishwa kusuka kule cache, esikhundleni sokulayishwa kusuka ekuqaleni. Abathuthukisi be-Google Chrome benze lesi sici ukuthuthukisa izikhathi zokulayisha ikhasi ku-Chrome, futhi abasebenzisi manje sebengazama.
Lokhu nje ukubuka konke kwezinguquko eziphawuleka kakhulu kule nguqulo entsha ye-Chrome. Ungafunda kabanzi mayelana nezinye izici ezintsha ezingezwe noma ezisuswe ku-Chrome 79 ku-Google Release Note.
Ungayifaka kanjani iGoogle Chrome 79 kuLinux?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Google Chrome 79 ifika nomsebenzi wamathebhu wokuqandisa, uhlu lwabamnyama ngesikhathi sangempela nokuningi
Ama-Xs: ikhodi - Ipulatifomu yokwenza imali yamaphrojekthi womthombo ovulekile